Monday October 26, 2020 - 20:15:35 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Jamhuuriyadda Somaliland (JSL) waa dalka qudha ee ku yaalla Geeska Afrika ee ay doorasho toos ah oo daah-furani ka dhacdo. Taas awgeed, JSL waxa lagu tiriyaa in ay ka mid tahay hormuudka doorashooyinka iyo siyaasadda ku dhisan xilwareejin nabdoon ee
waddamada Afrika. Walow waayadan dambe Somaliland lagu canaanto doorashooyin mudo- dhaafay; xil-hayeyaashii Goleyaasha Deegaanka (GD) iyo Xeer-dejintu (XD) ba ay wali iska dul
hawaaraan kuraastii iyada oo muddo-xileedkoodii dhammaaday. Ta se ugu wayn ee ay JSL ku tahay hormuudka Geeska Afrika marka ay timaaddo doorasho iyo dawladnimadu waa:sida ay salka ugu dhigtay hannaan dawladnimo oo ku dhisan codbixin, xisbiyo badan iyo siyaasad la
Sideedaba, codbixinta iyo doorashadu waxa ay ka dhigan tahay ballanqaad iyo himilo la rabo in baahiyaha bulshada la dayactiro; lana abuuro siyaasado lagu ilaalinayo dhawrista
horumarka bulshada, kana haqabtiraan muwaadiniinta adeegyada aasaasiga ah. Codbixiyuhu
waxay tahay in uu ka fiirsado cidda uu ku aaminayo balanqaadkaas, waana in ay u cadatahay waxa uu dhaafsanayo caleemo-saarka uu cid kale ugu cumaadayo in ay hoggaanka bulshada
qabato. Marka balanqaadku noocaas yahay, ayna kala cadahay waxa lays dhaafsanayo, waxa imanaysa in laysla xisaabtamo, oo hoggaanku wuu ka haybadaysanayaa shicibkiisa. Kaalinta GD oo qaabkan loo fahmaa waxa ay xoojinaysaa isla xisaabtan mug leh oo ka
Sidoo kale, waxa ay meesha ka saaraysaa niyadjabka, rejo beelka iyo kalsooni-darrada haatan kala dhex taalla madaxda siyaasadda iyo bulshada. Doorashada qabyaalada iyo qof-jeclaysiga
ku dhisanna waa la xaddidi karaa ama ba meeshay ka bixi kartaa, haddii fahamkaas la isla qaato. Waxa imanaysa muwaadinku in uu u arko bixinta codkiisa xilliga doorashooyinka
heshiis iyo damaanad culus oo dhex taal isaga iyo addeegayaasha GD. Waa marka uu codbixiyuhu wax ku dooranayo in wax loo qabto, bal se aanu qabiil ama mid ay is ku reer yihiin u codaynayn. Taas ayaa ku khasbaysa GD in ay u hayelsanaadaan, una dhego-nuglaadaan
shicibka, muujiyaanna jajabnaan dheeraad ah oo ku wajahan daboolista bulshada ee
Hishiiskaas dhex maraya muwaadinka iyo GD waa in loo arkaa in uu yahay ballanqaad Eebbe iyo uunku ba marag ka yihiin. Sidoo kale, muwaadiniinta laftooda, waxgaradka iyo
urrurada maxaliga ahi ba waxa ay ku baraarugsanaanayaan ilaalintii axdigaas; hadh iyo habeen na waa ay isku taxalujinayaan in ay dusha kala socdaan meel marintiisa. Taas waxa
laga dhaxli karaa kobac ku yimaadda fahanka, garaadka iyo kalsoonida shicibka ee ku waajahan arrimaha dawladaha hoose; ugu dambeyna waxa ay xoojin doontaa isla-xisaabtan
dhab ah. Dawladda Dhexe, Xeer-ilaalinta iyo Goleyaasha Xeer-dejinta Qaran iyaguna xil culus iyo cadaadis ayaa fuulaya, oo waxa ay ku khasbanaanayaan in ay si joogto ah u kormeeraan
Laga soo bilaabo markii Somaliland go’aansatay hirgelinta GD iyo fidinta maamulka dawladnimo waxa sii kordhaysay xiisaha loo qabo maamul daadajinta iyo ballaadhinta
adeegyada aasaasiga ah ee ay dawladaha hoose bixiyaan. Gobollada iyo degmooyinka ba waxaa ka aloosmay baraarug ku waajahan dawladaha hoose; nasiib darro se xiisahaasi ma
korin, mana dhaafin ashqaraarka doorashooyin ka iyo nin-beddal aanay ka dambayn caqli togani. Taas oo jirta, haddana weli si mug leh oo cilmiyeysan looma baadhin, loomana fahmin
waayaha ku gedaaman siyaasadda iyo arrimaha GD JSL. Maqaalkaan, oo aan ku wado in uu noqdo taxane, waxa aan kaga faalloon doonaa mihiimadda ay leedahay in la fahmo kaalinta
goleyaasha deegaan ee horumarka bulshada. Waxa aan ku iftiiminayaa sida ay bulshadu ugu baahan tahay in ay ka fiirsato cidda loo dooranayo GD haatan. Waxa aan dul istaagi doonaa
sida dawladaha hoose u yihiin tiir adag oo ay ku taagnaan karaan siyaasad, sharci iyo barnaamij kasta oo ku wajahan daryeelka bulshada iyo kaabayaasha dowladnimo. Sida ay
lagama maarmaan u tahay in awood buuxda la siiyo GD oo ay ku fuliyaan qorsheyaasha
horumarineed ee loo igmaday, ayay iyana lama dhaafaan u tahay in laga fiirsado cidda loo dhiibayo hoggaanka ee talada golleyaasha hagaysa.
Qoraalkani maaha cilmi-baadhis rasmi ah oo aan sameeyay, se waxa uu ka soo baxay fiirsi iyo u kuurgelis aan in muddo ahba u lahaa arrimaha dawladaha hoose iyo xamaasadda doorashada ee inagu soo fool leh. Afkaaraha iyo sharaxaadaha ku duugan qoraalkani waa
Ilaa iyo maalinkii Aadam iyo Xaawa la uumey, nooluhu waxa uu u tafo-xaydanayeen sidii ay u gaadhi lahaayeen nolol wanaagsan, oo daboosha baahiyahooda. Ina Aadam waxa uu isku taxalujiyay in uu deegaanka iyo waayaha ku gedaaman carbisto; kuna fushado dantiisa
iyo baahiyihiisa gaarka ah ee nololeed. Deddaallada uu ku horumarinyo habka uu u adeegsado deegaanka iyo agabka uu ku fushado hawlahiisa waa nidaan aan dabkiisu damin. Lagama
yaabo in uu marna joojiyo fekerka iyo himillada uu ku hagayo noloshiisa; geed dheer iyo mid
gaabanna waa uu u fuuley si uu u maareeyo arimihiisa.
Taariikhda waxa ka qoran raadraaca isku-dayo iyo tijaabooyin faro badan oo uu aadamuhu u sameeyay sidii uu u hagaajin lahaa noloshiisa. Iyada oo bulshooyinku ku kala
haddana, midda laga siman yahay waa in aadamuhu habeen iyo dharaarba hayaan nololeed ku jiro oo uu meel sare higsanayo. Ma hadhsado, hankiisu na waa halka aad joogto hore uga
sii hayaan. Kaasi waa se aadamaha qalbiga fayow ee fahmay awoodda iyo kartida Eebbe, koreeye, ku galladay. Aadamaha noocaas ahi had iyo jeer hammigiisu waa hagaajinta hababka
uu u nool yahay iyo kobcinta qaababka iyo siyaasadaha daryeelka bulshada ee uu dejistay. Taasi ayaa horseeday in ay bulshooyinka qaar hindisaan haykalo iyo halbeegyo horumarineed, uumiyaha inta kale na kaga dayday isticmaalkooda. Halbeegyada la hindisay qaar baa noqday
qaatay in ay noqdaan qaacidooyin iyo siyaasado jaangooya dariiqyada loo marayo hirgelinta nolol wanaagsan ee aadamahu raacdeynayo. Hababkaas iyo siyaabahaas nolosha wanaagsan
loo sameeyo loona jiheeyo waxa ugu mudan ‘dawladnimada’. Iyada oo taasi jirto, haddana aadamuhu waa uu u kula dheereeyay tijaabada iyo isticmaalka hababka dawladnimo iyo
farsamooyinka adeeg-bixineed ee la isla qaatay.
Waddamada hormoodka horumaray sheegtey, waxa ay samaysteen isla-xisaabtan iyo
tartan adag oo ilaalinaya siyaasada iyo hadafyadda la isla qaatay. Halbeegyada dawlad- wanaagga iyo horumarku na waa kuwo muwaadin iyo siyaasi ba si hufan u fahmeen, la iskuna
qiimeeyo hadba sida loo dhaqan geliyo. Halka waddamda kale iyaga oo halbeegii haysta, haykaladii dawladnimo iyo khayraadkii loo baahnaa haysta, hadana aanay fari ka qodnayn
hirgelinta nolol habboon oo shicibkoodu gaadho. Inta lagu kala tegayna waa kartida, fahanka
iyo aqoonta cidda sahanka loo dirtay, darka waraabkana loo igmaday ee wadaanta biyaha
daraysa, waa hoggaaminta’e.
Eebbe, koreeye, waxa uu inoo caddeeyay nolol uu ku sifeeyay ‘nolosha wanaagsan’, aadumuhu na yahay mid jecel raaxada iyo quruxda adduunka se ay jirto nolol waaraysa oo
dambe. Jidka saxda ah ee loo marayo noloshaas wanaagsan, waxa iyana si waafi ah innoogu iftiimiyay Sunnaha Nabi Maxammed (NNKH). Aadamuhu se muslim iyo gaal ba waxa uu
intaaba raad gurayaa habab kale oo nolol wanaagsan loo gaadhi karo. Maalin iyo dharaar, waxa uu wadaa baadhis, dood iyo aqoon-xooris uu ku sii iftiiminayo siyaasadaha iyo
halbeegyada intii ka horreysay dejisay ee loo arko in ay nolol habaysan/wanaagsan keeni
karto. Hilinnadaas uu aadamuhu u hindisay in uu ku maareeyo unugyada adeeg-bixinta bulshada, oo noqday astaanta nolosha wanaagsan ee muslim iyo gaal ba haybsanayo. Bulsho
Aadamuhu marka dhib ay soo wajaho, waxa u soo baxa heerka tamartiisa iyo baaxadda garaadkiisa. Marka ay cudurro dilaacaan, fatahaadi timaaddo, daadad na bulshada
qaadaan ama colaado ba curtaan waa la kala baxaa, oo intii iyadu hore u feejignayd, hami iyo
higsina nolosha ku hagaysay si dhib yar ayay u hagaajiyaan hawlahaas, una wajahaan carqaladahaas. Kuwiise habaaska iska hawaarnaa, tuugsi ku noolka ahaa, ee aan hor-gale
hagaagsan haysani waa ay hagaasaan; halkii ay joogeen hoos ayay uga sii dhacaan. Mar kasta
oo aad taariikhda iyo waayaha uumiyaha adduunkana eegto, kala taggaas uunbaa kusoo
baxaya, oo kuwa tanaaday ee buurta figteeda jooga, waxa aad arki uun in ay ku horumareen
deddaal, garasho iyo hoggamin habboon. Inta hoosta joogtana, hunguri xumo, habow iyo higsi
la’aan ayaad ka arkaysaa baalasha taarikhdooda, oo haddii aad hoos u sii eeg eegto waxa aad
ogaanaysaa in hab dhaqankoodu uu yahay halka ay eedeen. Sideedaba, taariikhdu waa
minqiyaas aad mooddo muraayad laga dhex arko heerarka aadumuhu soo maray iyo sida uu
u kala tagay, baratankii nolol na ugu kala dheereeyay.
arrimahooda la milicsado. Se, waa dhaqan ku goonni ah Soomaalida in kol ba cidda siyaasadda
iyo talada haysa la canaanto la na ceebeeyo, halka kuwii ka hor horreeyay na ammaanaan, oo
ay u arkaan in uu ka fiicnaayeen kuwa haatan jagada jooga. Waa dhaqan u baahan in dib loo
eego oo ay keenayso fahan yaraan laga qabo masuuliyadda iyo muhimadda hoggaanka
dawladnimo. Wali looma arko hoggaanku in uu yahay adeeg-bixiye ay khasab ku tahay in uu
u dhibirsanaado una dhego-nuglaado dhawaaqa iyo baahiyaha bulshada.
Haatan oo kaltankii saddexaad ee GD loo heensaystay, waxa muuqda in doorka
dawladaha hoose ee horumarka dhaqan-dhaqaale iyo siyaasadeed ee bulshada Somaliland
aan si wacan loo fahmin. Sabatuna waa: iyada oo goleyaasha haatan iyo kuwii ka horreeyayba
ay soo food saartay caqabado muuqda oo khuseeya maamulkooda iyo maaraynta hawlihii loo
igmaday. Labadii kal ee isku xigey ee GD la doortay may dhicin in ay kalsooni buuxda ka helaan
bulshada, lamana arag horukac la taaban karo oo ay ku soo biiriyeen nololshii magaalooyinka
iyo degmooyinka. Marka la eego muddadii ka soo wareegtay xiligii la bilaabay GD, dhaqaalihii
ay maamulayeen labadii gole ee hore iyo dayaca iyo daruufta ka muuqata magaalooyinka iyo
degmooyinka, waxa aad ogaanaysaa in aan wali bulshadani fahmin doorka iyo masuuliyadda
GD. Haddii in uun wax laga fahmi lahaa waxa ay tahay masuuliyadda GD, waxa la arki lahaa
iyada oo lala xisaabtamayo GD ee haatan iyo kuwii ka horreeyay ba.
Xaaladaha dhaqan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhisan qabyaaladda iyo kala
qaybsanaanta isir-sooca iyo takoorka leh, ayaa caqabad weyn ku noqonaysa in bulshadu si
Xilligan casriga ah, GD waxa ay ku dhisan yihiin sharci goleyaasha xeerdejintu meel
mariyeen (Xeer Lr. 23/2019), laba doorasho oo hore na lagu glay imikana wax ka beddel lagu
sameeyay sannadkii hore ee 2019. Waxa loo arkaa in GD yihiin udub-dhexaadka adeeg-bixinta
dawladnimo ee JSL, iyada oo la rabo in gebi ahaanba adeegyada aasaasiga ah lagu wereejiyo
iyaga. Waxa la rabaa in ay go’aamiyaan adeegyada iyo mashaariicda halbowlaha u ah
horumarka iyo maareynta nolol muwaadiniinta JSL. Habka ay u shaqeeyaan iyo sida ay u
hagaan nolol bulshada ayaa ah halbeega lagu qiyaasi karo horumarka iyo hodantinimada
bulshada. Adeegyada ay ka mid ka yhiin: nabadgelyada, waxbarashada, caafimaadka,
nadaafadda, cashuurta, bilic, ciyaaraha, biyaha, deegaanka iwm; waxan oo dhan ayay tahay
in ay iyagu maamulaan. Waxii samatabixin ah iyo abaabul bulshadeed ah xilliyada
reebista iyo igmashada xildhibaannada GD ee doorashada soo socota. Haddii la rabo in laga
fogaado dhibaatooyin dhaqaale, siyaasaded, shaqaale, musuqmaasuqa iyo qabyaaladeed ee
ragaadiyay goleyaashii hore, waa in maanta laga hawl galaa. Casharradii laga bartay labadii
gole ee hore waa in loo adeegsado in gefafkii lagu saxo, lana hagaajiyo habka loo marayo
doroashada, maamulka iyo hoggaanka GD.
nolol qofka muwaadinka ah, waa in isbeddel xoog leh oo dhan kastaba ah lagu sameeya habka
haatan loo wado adeeg-bixinta GD. Waa in ay is-waafaqaan kobaca baahiyaha aasaasiga ah
ee magaalooyinka waaweyn, kartida iyo xirfadaha hoggamineed ee GD. Si qorsheysan oo
feejignaan leh haddii aan loo wajihin is-waafajinta labadaas arrimood, waxa iman kara
dheelitir la’aan nololeed oo wiiqaya deddaalka iyo geedi-socodka dawladnimo ee JSL.
goleyaasha deegaanka waxa habboon in ay noqdaan kuwo ku shaqeeya gunnooyin, oo aan
qaadan mushahar joogto ah. Sida waddamada horumaray, waxa ay tahay in shuruudo adag
adeegyada iyo go'aaminta iyo hirgelinta mashaariicda lagu dhammaystirayo
tahay in aqoonyahanada iyo daneeyayaasha horumarka bulshaduba dodo cilmiyeysan
geliyaan habka ugu habboon ee loo wajihi karo isbeddal lagu sameeyo sida haatan loo wajaho
doorashada golleyaasha deegaan. Arrimaha ugu mudan ee ay tahay in hoos loo eego waxa ku
jira doorashada duqa magaalooyinka, gobollada iyo ku xigeenadooda oo u mudan in si toos
ah loo doorto. Sidoo kale waxa iyana wanaagsanaan lahayd in magaalooyinka laftooda wax-
waaxyo loo kala jajabiyo, si maamulka iyo adeegga ba loogu sii dhaweeyo dadka, isla-
xisaabtankuna u noqdo mid daah-furan. Kalsoonida iyo lexejeclada bulshada ayaa iyana sidan
ku kobci karta.
noqotoa hishiis iyo ballan adag oo dhextaal siyaasiyiinta iyo shicibka. Haddii bulshadu
dareento, la na arko in GD uu sagsaagayo fulinta iyo kasoo bixinta masuulliyadaas,
codbixiyuhu markaas wuu ka leexdaas xisbigaas, waxaa na dhacda in hoggaanku isbadello.
Waxa uu sidoo kale masuul ka ahaa aasaaska Kuuliyada barashada saxaafada ee Jaamacadda
Hargeysa (School of Journalism), oo uu iyana hormood ka noqday.